Cristiano Ronaldo iyo sababta dhabta ah ee uu Real Madrid kaga tagay oo banaanka lasoo dhigay | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Cristiano Ronaldo iyo sababta dhabta ah ee uu Real Madrid kaga tagay oo banaanka lasoo dhigay
Real Madrid waxay si rasmi ah nabad galyo u dhahday Cristiano Ronaldo bishii July ee sanadkan laakiin cayaaryahan safarka uu kaga tagayay Bernabue wuxuu soo bilaawday bishii May 2017.
Dhibaatada uu kala kulmaayay Cristiano Ronaldo saraakiisha canshuuraadka Spain qaabilsan ayaa ugu dambeyntii sababtay inuu Juventus ku biiro.
Haddaba warbixin cusub oo ay soo daabacday El Mundo ayaa shaaca looga qaaday sababtii dhabta ahayd ee Cristiano Ronaldo ku qasabtay inuu Real Madrid isaga tago.
Haddaba macluumaadka El Mundo heshay iyo xogtaan xasaasiga ah ee bixitaankii Ronaldo lagu sababeeyay fadlan hoos kaga bogo:
Kulankii Ronaldo iyo Wakiilkiisa Mendes Dhex Maray May 2017:
Ronaldo ayaa kulan la qaatay wakiilkiisa Jorge Mendes May 2017 sidoo kalena la taliyaashiisa dhanka sharciga iyo dhaqaalaha ayaa ka qayb qaateen kulankan ka dhacay guriga wakiil Mendes.
Haddalkii Ronaldo uu kulankan ka dhahay “Horey waxaan u dhahay wax halis ah ma doonayo. Aniga waxba barananin kaliya nolosheyda waxa ugu wanaagsan aan sameeyay ayaa ah inaan kubada cagta cayaaro. Laakiin ma ihi qof doqon ah mana aaminayo qof walbo!”
“Waa sababta aan marwalbo u bixiyo 30% ka badan marka aan kiireesanayo la taliye sharci ama dhaqaale , sababtana waxay tahay ma doonayo dhibaato inaan dhexda ka galo.”
Ronaldo qareenkiisa dhanka sharciga Carlos Osorio oo kulankan goob joog u ahaa ayaa xidigan dajiyay una sheegay in wax walbo la xaliyay sidoo kalena uusan sii walaacin.
Bilooyin Kadib Saraakiisha Canshuuraadk Spain oo Ronaldo Culees Soo Saareen:
Bilooyin kadib Ronaldo aad ayuu u carooday madaama saraakiisha canshuraadka Spain shaaca ka qaadeen in xabsi la galinaayo canshuurna uu la dhuuntay waxayna Ronaldo ku noqotay arin uusan qaadan karin.
Ronaldo ayaa kulan kale la taliyayaashiisa isugu yeeray wuxuuna yiri “Marnaba maya ma dhihin bixinta canshuuraadka arin ku aadan!”
“Waxaan doonayaa inaan ogaado waxa dhacaayo.”
“Cidna ma aaminayo, waayo canshuurta waxaa laga rabaa inay bixiyaan kuwa aan taabagalinta cayaaraha iyo adeegyada kale u sameeyo, haddaba maxay tahay sababta aniga dambe la iigu saarinayo ama la iigu eedeenayo inaan qalad galay?”
Ronaldo Oo Garab Ka Waayay Kooxdiisa Real Madrid:
Madaama uu ku qasbanaaday inuu sharciga u hogaansamo sidoo kalena uu bixiyo lacagaha ganaaxa ah ee waaxda canshuraadka Spain kusoo rogeen wuxuu garab ka waayay kooxdiisa Real Madrid.
Ronaldo wuxuu rajeenayay in kooxdiisa Real Madrid u garab istaagi doonto sidii Barcelona u garab istaagtay Lionel Messi markii kiiska canshuur lunsashada lagu soo eedeeyay.
Ronaldo ugu yaraan wuxuu ka rabay maamulka Madrid inay qandaraas cusub ka saxiixaan oo dhaqaale fiican lagu siiyo si uu isaga bixiyo lacagaha canshuur ahaan ganaax ah looga rabay.
Laakiin Real Madrid marnaba ma rabin Ronaldo iyo wakiiladiisa dhibaatada sharci ay dhexa kaga jiraan inay soo fara galiso taasina waxay sababtay in madaxda Madrid ka gaabsadaan garab siinta Ronaldo!
Xushmadii Daradii uu Ronaldo Ka Dhex Dareemay Maamulka Madrid:
Ronaldo wuxuu rabay in laga dhigo xidiga caalamka ugu mushaarka badan madaama Messi qandaraas waali ah Barcelona ka saxiixday sidoo kalena Neymar isagana naadiga PSG u bilaawday inay siiso mushaarka ugu sareeyo.
Laakiin Ronaldo sumcada uu raadinayay wey la fahmi waayeen madaxda Real Madrid waana laga caga jiiday in qandaraaskiisa dib loogu laabto si mushaar kordhin loogu sameeyo.
Ronaldo Xanaaqiisii Iyo Markii Tababare Zidane Isku Dayay Inuu Xaliyo:
Ronaldo xanaaqiisa wuu qarsan waayay wuxuuna la dhex yimid qolka labiska Madrid asigoo banaanka soo dhigay in waxqabadkiisa aysan gar waaqsaneyn madaxda kooxda.
Sidaa darteed macalin Zidane ayaa isku dayay inuu xaliyo arinkan wuxuuna la xariiray madaxda sare Madrid madaama Zidane diidanaa qolka labiska Madrid dhibaatada saameyso balse dadaalkii Zidane uu sameeyay miro dhal ma noqonin madaama maamulka kooxda xiligaas ka gaabinayeen Ronaldo inay lacag kordhin u sameeyaan.
Ronaldo Wuxuu Dhibsaday Sharafka La Siiyo Halyee Alfredo Di Stefano:
Ronaldo oo noqday cayaaryahanka taariikhda Madrid ugu goolasha badan uguna waxqabadka badan haddana maamulka kooxda wuxuu ka dareemay inay haggar ku wadaan madaama shirarka kooxda iyo kulamada bulshada lala yeelanayo marwalbo maamulka kooxda ku cel celin jireen Alfredo Di Stefano inuu yahay midka ugu wanaagsanaa ebid Madrid usoo cayaaray.
Sidaa darteed Ronaldo wuxuu dareemay dadaalkiisa iyo juhdigiisa inuu meel cidlo ah ku baxaayo marba haddii xushmad iyo qirasho uusan ka heysanin maamulka kooxda asigoo wax walbo u sameeyay naadigan faca weyn.
Gunaanad: Xiriirka ka dhaxeeyay Ronaldo iyo kooxdiisa Real Madrid wuxuu gaaray heerkii ugu xumaa, wuxuuna qaatay go’aan ah kooxda inuu isaga tago, kuna biiro Juventus sidoo kalena waayo cusub ka bilaabo gudaha Talyaaniga.
Previous: Maamulka Gobolka Banaadir oo la wareegay garoonka Minishiibiyo ee degmada Warta Nabadda +SAWIRRO XUL AH
Next: Agaasimaha guud ee Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada oo xilka la wareegay